Vaovao - Rehefa avy namaky an'ity ianao, dia sahy misotro kafe isan'andro ve ianao amin'ny kaopy taratasy mifono PE?
Ho an'ny olona maro, ny fanombohana tsara dia ny antsasaky ny ady. Ny asa maraina dia manomboka aorian'ny kapoaky ny kafe mafana ... Amin'izao fotoana izao, ny kafeinina dia mamatotra mpandray receptor iray ao amin'ny ati-doha, ka mahatonga ny ati-doha tsy afaka mahazo signal "reraka", noho izany dia manome tosika ny herin'ny herin'ny olona.
Na izany aza, nisy fanadihadiana iray vaovao namoaka fampitandremana: ny fampiasana lavitry ny kaopy misy taratasy azo sotroina mba hisotro kafe mafana na zava-pisotro mafana, ao anatin'izany ny fihinanana (mafana) ao anaty boaty fisakafoanana azo ampiasaina, dia handoa ny vidin'ny fahasalamana.
Tamin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny 《Journal of Hazardous Materials》 (IF = 9.038), ekipa mpikaroka iray avy amin'ny Indian Institute of Technology dia nahita fa ny kafe mafana na zava-pisotro mafana hafa ao anaty kaopy taratasy azo ampiasaina ao anatin'ny 15 minitra avoaka ao anaty zava-pisotro, dia ny poti plastika ...
Fantatsika rehetra ny plastika bitika. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, tamin'ny famokarana marobe sy ny fampiasana plastika, dia nitombo hatrany ny fifantohana plastika bitika eto amin'ny tontolo iainana. Ny fahalotoan'ny plastika bitika dia nanjary olana ara-tontolo iainana manerantany miaraka amin'ny fihenan'ny ozone, ny fanamasinana ny ranomasina ary ny fiovan'ny toetrandro.
Nilaza ny mpikaroka fa ireo plastika mikraoba saika tsy hita maso ireo dia manohintohina ny fahasalaman'ny olombelona. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ekipa mpikaroka amerikana nahita voalohany ny plastika mikraoba tao amin'ny taova olombelona. Matahotra ny olona fa hiteraka homamiadana na tsy fiterahana io fandotoana io. Nasehon'ny fanadihadiana fa ny fandotoana plastika bitika dia mety miteraka fivontosan'ny biby.
Ny mpanoratra ny fandinihana, Dr. Sudha Goel, Sekolin'ny Siansa momba ny tontolo iainana sy ny injeniera, Ivon-toeram-pianarana teknolojia indiana, dia nilaza hoe: "Ny kaopy taratasy feno kafe mafana na dite mafana dia hanimba ny sosona microplastic ao anaty kaopy ao anatin'ny 15 minitra. hanimba ny haben'ny mikrôtre 25000. Ny zahana dia alefa anaty zava-pisotro mafana. Ny olon-tsotra izay misotro dite na kafe telo kaopy ao anaty kaopy taratasy fanary isan'andro dia hihinana fantsona plastika 75000 tsy hitan'ny maso mitanjaka. "
Tombanana fa tamin'ny taon-dasa, ny mpanamboatra kaopy taratasy dia namokatra kaopy taratasy sahabo ho 264 miliara, izay maro no ampiasaina amin'ny dite, kafe, sôkôla mafana, ary na lasopy aza. Io isa io dia mitovy amin'ny kaopy taratasy 35 isaky ny olona eto ambonin'ny planeta.
Ny fitomboana tsy mitsaha-mitombo amin'ny isan'ny serivisy fitondra manerantany dia nahatonga ny fangatahana vokatra azo. Amin'ny fiainana sy asa be atao ankehitriny, dia lasa andavanandro ho an'ny olona maro ny manafatra fanaterana sakafo. Ny boaty fisakafoanana azo atsipy dia hariana raha vantany vao lany izy, ary amin'ny ankapobeny dia tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana toy ny kaontenera plastika sy styrofoam. Na eo aza izany, hoy i Sudha, dia mora ny vidiny.
Nanampy ny mpikaroka hoe: "Ny plastika mikraoba dia miasa ho toy ny mpitatitra loto, toy ny ion, metaly mavesatra misy poizina toy ny paladium, chromium ary cadmium, ary fitambarana organika izay hydrophobic ary mety hiditra ao amin'ny fanjakan'ny biby. Raha mihinana ela, ny Mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamana izany. Matotra tokoa. "
Teknika saro-pady amin'ny fanasarahana ireo zavatra simika no nanondro ny plastika bitika amin'ny rano mafana. Ny tena manahirana indrindra, ny famakafakana ilay sarimihetsika plastika dia nanambara ny fisian'ny metaly mavesatra ao anaty fonony.
Hitanao fa "manaitra" ny valim-panandramana etsy ambony, ka misy vokatra afaka manolo ny kaopin-taratasy mifono PE ve?
Eny ny valiny! Ny anay Kaopy taratasy EPP, Boaty fisakafoanana OPB andiany, sns., dia nandalo tanteraka ny fanandramana sy ny fanamarinana ireo manampahefana manam-pahefana isan-karazany (fanandramana ny fiarovana ny poizina biolojika, ny fitsapana fluorine POP, ny fitsapana ny fifindra-monina manokana, sns.), ary azonao antoka fa azo ampiasaina ny pulp na ny taratasy namboarina. Ataovy izay ho laharam-pahamehana ny composting, fantaro ny fanodinam-bokatra ary ampiasao plastika azo antoka sy sariaka. Ny kaopy taratasy novokarina niaraka taminy dia afaka manolo ny kaopin'ny taratasy mifono PE.